Jose Mourinho oo shaaca ka qaaday kooxdii ugu fiicneyd uu soo maamulay xirfadiisa tababarnimo – Gool FM
Dajiye September 12, 2019
(Yurub) 12 Sebt 2019. Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday kooxdii ugu fiicneyd uu soo maamulay xirfadiisa tababarnimo ee uu khibrada ka helay.
Macalinka reer Portugal ayaa shaaca ka qaaday in Real Madrid ay tahay kooxdii uu ku qaatay khibradiisii ugu fiicneyd ee waayihiisa tababarnimo ilaa iyo haatan.
Dhinaca kale Mourinho ayaa tilmaamay in waqtigiisii ugu fiicnaa ee kooxda Real Madrid uu ahaa kulankii finalka Copa del Rey ay kaga guuleysteen naadiga Barcelona.
Mourinho ayaa qabtay shaqada kooxda Real Madrid intii u dhaxeysay 2010 ilaa iyo 2013-kii, isagoo kula guuleystay Copa del Rey oo hal jeer ah, horyaalka La Liga oo hal jeer ah, iyo sidoo kale Spanish Super Cup.
Jose ayaa wareysi uu ku bixiyay “Channel 11” ee dalka Portugal ayaa wuxuu ku sheegay:
“Kooxda Real Madrid waa qibradeyda ugu fiican tababarnimo ilaa iyo haatan, sababa la xiriira waxa aan ku soo bartay macalin ahaan iyo shaqsi ahaan, waxaa sii dheer casharadii aan ku qaatay nolosheyda shaqsiyadeed iyo xirfadeyda”.
“Markii aan la wareegay shaqada kooxda Real Madrid, waxay ii sheegeen inaan wajahayno kooxda adduunka ugu fiican, waxay ahaayeen kuwo naga awood badan, isla markaana loo baahan yahay in wax laga badalo”.
“Waxay aheyd inaan ka hortagno Barcelona inay na burburiso, taasina waa sababta ugu weyn ee Finalkii Copa del Rey aan kaga guuleysanay, waxayna aheyd waxa ugu muhiimsan, waxaan ku guuleysanay horyaal iyo Spanish Super Cup, balse ma jirin wax la mid ah Copa del Rey”.
Lionel Messi oo ka hadlay cashada Qarniga ee la filayo inuu la qaato Cristiano Ronaldo